Ngabe i-ANC izovuma uZuma afele athi izinkolelo zakhe? - Bayede News
Isithombe: nguWaldo Swiegers/Bloomberg
Umbutho wezempi usudonswe ngendlebe ukuhlala ulungile
Ubuholi bukaRamaphosa kungqingetshe ngodaba oluthinta omunye wabo
Kuke kwakhona isikhathi lapho imilomo yabe ivunana ezweni ukuthi uMnu uRamaphosa uyisixazululo ekulungiseni ‘amadede’ abe eshiywe ngowayenguMengameli uMnu uZuma. Leli lenza abanye kwabezindaba nakubahlaziyi bafanise ihlandla likaRamaphosa njengaleli likaMandela owaba yibhuloho lokusuka enqubeni yobandlululo kuyiwa kudemokhrasi. URamaphosa yena kwabe kuthiwa uzoba yibhuloho eliwelisa leli eminyakeni ‘yamadede’ kaZuma kuya enaleni. Konke lokhu sekungumlando ngoba izwe lihlukene phakathi ngobuholi hhayi kuphela bukaRamaphosa kepha abanye sebeze baliphimise impela elokuthi ngisho okwalo iqembu elibusayo, uKhongolose ubuholi kuHulumeni abusashayi khona. Lokhu baze abanye ngaphakathi okubalwa nowayenguMengameli uMotlante baphimise umbono othi; ‘Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi leli qembu lehlulwe kanye okhethweni kuzwe lonke’ ukuze libazi abantu.
Namuhla ubuholi baleli qembu kuzwelonke bubhekene nesinqumo esinzima nokusobala ukuthi alinawo ngisho amandla okubhekana naso. Lesi yisinqumo esimayelana nomunye wabo, uZuma okusobala ukuthi umile esinqumeni sakhe sokuthi angeke asayilekelela iKhomishini ebheke izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso neholwa nguMehluleli uZondo. Lokhu ngokwesicelo seKhomishini eNkantolo YoMthethosisekelo kufanelwe yisigwebo seminyaka okungenani emibili uZuma ebhadla ejele.
Leli phephandaba selingakuqinisekisa ukuthi uZuma emhlanganweni abe nawo nobuholi bukazwelonke uphinde lokhu akusho kwabanye, ukuthi akayi kuZondo. Ubasole ngokuthi kade bembuka edikadikwa bese kuthi uma esezilwela izimpi zakhe bese beba nombono. Uqhubeke wathi ngokuthula kwabo uma ekhomba amabatha kwezobulungiswa bafakazele labo abathi udelela uMthethosisekelo nento athe ayilona iqiniso.
Leli phephandaba likhuluma nonolwazi olunzulu lwalo mhlangano nocele ukuba angavezwa uthe uZuma akasinisi mahleza uma ethi akalesabi ijele. “Ubaba ukubeke kwacaca ukuthi ngeke aye esilaheni nayilapho ezodikwadikwa ngabezomthetho abanamabatha”. Lokhu kuzofakazelwa yisenzo sakhe sokungawafaki amaphepha aphikisa isicelo esenziwe yiKhomishini sokuthi akaboshwe iminyaka okungenani emibili.
Ukuya kukaZuma ejele ngeke kube yinto elula ebuholini bukaRamaphosa kanye neqembu jikelele njengoba livese lehlukene phakathi ngalolu daba. Okunye okubukeka sekudunge amanzi wukusondela kuZuma kwabanye abaholi namaqembu aphikisayo.
Emuva kokuphuma kwesinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo nebesithulwa nguMehluleli uJafta nesilayelo ebesiphoqa uZuma ukuba aye kuKhomishini. Akuphelanga zinsuku zingaki yala eyakwaDakw’udunuse ukuya ejokeni. Encwadini ayikhiphe ngoMsombuluko esiphuma kuwo uZuma wathi ufisa ukusheshe akucacise ukuthi le Khomishini eholwa uMehluleli uZondo ngeke azihlanganise nayo kubhekwe phambili.
“Uma lokhu kuthathwa njengokwephula umthetho, umthetho wabo awenze okufanele,” kusho uMsholozi encwadini yakhe.
Waqhuba wathi: “Kulezi zimo, akukho okunye engingakwenza ngaphandle kokuba ngilwe nokungabi bikho kobulungiswa njengoba ngenza kuHulumeni wobandlululo. Ngizimisele ukuphinde ngiye ejele ukuvikela amalungelo akuMthethosisekelo, ngidonse noma yisiphi isigwebo lo Hulumeni okhethwe ngokwedemokhrasi obona sifanele indlela ekhethekile neyemithetho eyahlukile ukufeza inhloso ngoZuma.”
Le nkulumo kaZuma yahunyushwa ngabeKhomishini njengokubukela phansi uMthethosisekelo wezwe. Nokho yena uthi akwenzayo wukuvikela ilungelo lakhe njengoba iKhomishini ethi inaye shaqa.
“IKhomishini eholwa iSekela likaMehluleli Omkhulu isilandele ezinyathelweni zowayenguMvikeli WoMphakathi ngokuqhubeka nokwakha indlela ekhethekile nehlukile ukubhekana ngqo noZuma,” kubeka uMsholozi.
IKhomishini ngomlomo kaSolwazi u-Itumeleng Mosala yathi okushiwo nguZuma kulishwa futhi akwamukelekile ezweni elingaphansi kwenqubo yedemokhrasi nelibuswa ngoMthethosisekelo.
“Okubi wukuthi umuntu owenza lokhu ngumuntu owayenguMemgameli wezwe nokumele ngabe uyisibonelo ekugcinweni komthetho,” kusho uSolwazi uMosala.
Uqhube wathi kuyamangaza ukuthi uZuma ubukela phansi iNkantolo YoMthethosisekelo kepha ngakolunye uhlangothi ucosha imihlomulo nawuthola ngenxa yawo uMthethosisekelo nokuyimali yabakhokhi bentela.
“Kubukeka sengathi uZuma uzibona engaphezu komthetho noMthethosisekelo. IKhomishini imile ekutheni ngokoMthethosisekelo wonke umuntu uyalingana ngaphambi komthetho,” kusho uSolwazi.
nguMfo waKwaNomajalimane Mar 12, 2021